LIISKA NOOCYADA EYGAA UGAARSIGA AH - EEYAHA
Liiska Noocyada Eygaa ugaarsiga ah
'Tani waa Xerxes, my Bluetick Coonhound lix bilood jir iyo Loki, my Isku dar cur . Waxaan ku tababbaranaynay qafis duudduuban oo ku yaal daaradayda magaalada Covington, Georgia. '
Tani waa liistada noocyada badanaa loo isticmaalo ugaarsiga maanta. Eeyaha ugaarsiga waxaa loo kala saaraa ugaadhsadaha, eeyaha qoryaha, feeraha, cabsi iyo habaar. Waxay u sii kala jabeen ur, aragga iyo eeyaha raad-raaca. Noocyada qaar waxay leeyihiin in kabadan mid kamid ah hibooyinkaas. Qaar badan ayaa sidoo kale sameeya xayawaan wanaagsan haddii ay si fiican u jimicsadaan. Khadadka ugaarsiga qaarkood waa la dhaqaaleeyaa oo loo sara kiciyaa eeyaha ciyaarta .
Leopard Hound Mareykan ah
Anglo-French Dhexe Venerie (sawir ayaa loo baahan yahay)
Anglo-Faransiiskii Petite Venerie (sawir ayaa loo baahday)
American Ingiriisi Coonhound
Eyga Dabagalka Mareykanka (Sawir ayaa loo baahan yahay)
Biyo Ameerikaan Mareykan ah
Benist-lugged Feist (sawir ayaa loo baahan yahay)
Madow iyo Tan Coonhound
Black Hound Hound
Afka Madoow Cur
Madow Nork Elkhound
Buluug Picardy Spaniel
Braque D'Ariege (sawir ayaa loo baahan yahay)
Braque D'Auvergne (sawir ayaa loo baahan yahay)
Braque Dupuy (sawir ayaa loo baahan yahay)
Braque Saint-Germain (sawir ayaa loo baahan yahay)
Braques Francaises (sawir ayaa loo baahan yahay)
Cajun eey Doug
Camus Cur (sawir ayaa loo baahan yahay)
Chesapeake Bay Hawl-gabe
Tercker ugaarsiga Decker
Tilmaamaha Tilmaamaha Jarmalka
Drentse digaagduur Dog
Bariga Siberia Laika
Ingiriisi Springer Spaniel
Isbaanish Faransiis ah
Picardy Spaniels (sawir ayaa loo baahan yahay)
Spitz Finnish ah
Faransiis Brittany Spaniel
Jarmalka ugaarsiga Terrier
Tilmaame Jarmal Longhaired
Pointeraner Jarmal (sawir ayaa loo baahan yahay)
Jarmal Gaaban oo Jarmal ah
Tilmaamaha Gaaban ee Jarmalka
Shaybaarka Jarmal Jarmal
Griffon Fauve de Bretagne (sawirka ayaa loo baahan yahay)
Grand Anglo-Francais (sawir ayaa loo baahan yahay)
Henderson Cur (sawir ayaa loo baahan yahay)
Tilmaamaha Hertha (sawir ayaa loo baahan yahay)
Irish Cas iyo Deji Cadaan
Isbaanishka Biyaha Isbaanishka
Istrian Counde -iredired Hound (sawir ayaa loo baahan yahay)
Istrian Gawaarida Gaaban
Karelian Bear Eyga
Kemmer Cur (sawir ayaa loo baahan yahay)
Kemmer Stock eyda squirrel eyga
Geed Weyn Hound
Reer Nork Elkhound
Nova Scotia Duck-Tolling Cunista
Dog Digaag Digaag ah
Buurta Cur Original
Qalin-dabada Feist (sawir ayaa loo baahan yahay)
Burgos Perdiguero (sawir ayaa loo baahan yahay)
Perdiguero Navarro (sawir ayaa loo baahan yahay)
Pont-Audemer Spaniel (sawir ayaa loo baahan yahay)
Eyga Bakeeriga Botigaliska (sawir baa loo baahan yahay)
Laika Russo-European (sawir ayaa loo baahan yahay)
Holo Slovakia ah
Tilmaamaha Xun ee Slovakian
Yar Swiss Hound
Koonfurta Blackmouth Cur
Eyga Biyo Isbaanishka
Jiilaal Isbaanish ah
Istaraatiijiyada 'Stock Mountain Cur'
Stichelhaar (sawir ayaa loo baahan yahay)
Swedish Elkhound (sidoo kale loo yaqaan Jamthund) (sawir ayaa loo baahan yahay)
Geed-beereha Beerta (sawir ayaa loo baahan yahay)
Geed Tennessee Brindle
Geed Walker Coonhound
Villain ee Las Encartaciones
Welsh Guga Spaniel
Cimilada Galbeedka Siberia
Galbeedka Buurta Cur
Wirehaired Points Griffon
Hawl-gabe Waayha ah
Villain ee Encartaciones
Xerxes, a Bluetick Coonhound markuu lix bilood jiro Loki, a Isku dar cur geedo a rakoon
Xerxes, a Bluetick Coonhound markuu lix bilood jiro Loki, a Isku dar cur geedo a rakoon —Loki geedka ayuu ku jiraa.
Loki, a Isku dar cur tababar lagu siinayo raccoon qafis duuban
'Ruux (bidix) iyo Otto (midig) shaqo da' ahaan markay jiraan 11 toddobaad! Heer sare ilaaliya ardayda , ugaarsadayaasha doofaarka iyo dhaqato ! Waa kala badh Afka Madoow Cur iyo badh Adhijirka Jarmalka ! Kickin 'dabada ilaa 6 toddobaad jir.'
galbeedka Highland white terrier pic
Madoow saafi ah iyo Tan Coonhound.
'Kani waa Bonnye Mal (eey badh ahaan jirridda geedka). Iyadu waa 2 jir Geed Walker Coonhound . Bonnye waxaa laga korsaday xarun xayawaanaadka lagu xanaaneeyo markii ay ahayd 1 sano jir ka dib markii milkiilaheeda uu ku guuldareystay inuu sheegto iyada. Bonnye waa mid aad u macaan aadna u jecel inuu raalli geliyo jecelna feejignaanta laakiin aan aad ugu dhegin. Way i tijaabin doontaa mararka qaarkood laakiin si fudud ayaa loo xakameyn karaa. Waxay ku jirtaa jadwal waxayna doorbideysaa inay ku sii ekaato. Tusaale ahaan, maalmaha xanaanada caruurta way kacdaa waxayna diyaar u tahay inay aado 6:00 subaxnimo hadii kale waxay jeceshahay inay seexato. Way weyntahay caruur mana dhibto kan bisad . '
Eeyaha kale ee sawirka ku jira waa sida soo socota, ' Eyga madow iyo caddaan ee ku tiirsan geedka ku xiga Bonnye waa 1/2 Daanyeer Weyn iyo 1/2 God dibi ama laga yaabee Feedhyahan . Ma aqaan magaceeda laakiin waa eey aad u qabow. Eyga 3-lugood leh waa a Saluki wuxuu ku dhashay lugta lugta sidaas darteed milkiilayaashu waxay ka gooyeen markii uu pup ahaa. Waxa kale oo jira a Adhijirka Jarmalka , si Shukulaatada Shukulaatada , Shaybaarka Madow , iyo dhowr kale noocyo isku dhafan . Waa xannaano-maalmeed weyn.
boon buluug iyo cadaan midabkiisu cad yahay
Bonnye (Geedka Walker Coonhound ee kalabar geedka jirridda ah) ayaa laga yaabaa inay soo qaadatay xoogaa tababar ugaarsi ah ka hor intaanan helin. Waxay leexleexdaa markay caraf ku dhacdo oo waxay yeelan doontaa dabagaallo. Sawirada laga soo qaaday goobta xanaanada caruurta, waxay nasiib u yeelatay nasiib laawaha dagan ee dagan geedka pecan ee ku yaal xanaanada caruurta Bonnye. Bonnye waxay baraysaa asxaabteeda sida loo fuulo geed. Waxay aadaa xanaano-maalmeedka laba jeer inta lagu jiro usbuuca inta aan shaqeynayo. Waxay sidoo kale ku raaxeysataa jardiinada eyda maxalliga ah oo ay ka buuxaan dabaqadolo. Waxay leedahay shaqsiyad weyn-farxad-nasiib leh waxayna ahayd farxad tan iyo maalintii 1aad! '
Waxaan daawadaa Cesar Millan fursad kasta oo aan helo. Falsafadiisa ayaa si fiican u shaqeysay aniga iyo eeyga labadaba. Way fududahay in la tababaro inkasta oo aan wax yar ka shaqeyno. Way fahantay inaan ahay hogaamiyaha baakadka sidoo kale waan aaminsanahay - taasi waxay kadhigeysaa xiriir caafimaad iyo farxad leh. Waan ku kalsoonahay iyada waana ay igu kalsoon tahay. '
Waan ogahay in dabagaaluhu halkaa joogo!
i sawir ka dhigayo hormuudka ah Ayrish
goortaad iska siineyso eeygaaga
shar pei oo lagu qasay pitbull
bulldog american iyo beagle mix
isku dhafka bichon schnauzer ee iibka ah
beerka midabkiisu midabkiisu yahay mid sumoobay